'Multi-currency system to stay' 30 October 2018 HARARE - President Emmerson Mnangagwa, yesterday said the multi-currency system is here to stay, and encouraged Zimbabweans to be patient and endure the pain while his government makes efforts to revive the economy. Mnangagwa made these remarks at the State House yesterday, where he hosted ban...
Sound policies key to economy 9 August 2013 HARARE - President Robert Mugabe and his Zanu PF party have a mammoth task of convincing a sceptical world that Zimbabwe can grow its economy. There is no doubt that the gains of the four-year transitional government are at risk of being reversed as the world shivers at the prospect of a five-...
'Economy to nose-dive' 2 August 2013 HARARE - With reports indicating yesterday that Zanu PF and President Robert Mugabe were headed for a controversial win in the harmonised elections, the economy is likely to nose-dive, economists say. According to Mugabe's Zanu PF manifesto, the 89-year-old leader — who has presided over the c...
Mugabe win disastrous: Economists 30 July 2013 HARARE - With less than 24 hours left for Zimbabweans to vote in a make-or-break election, economists say the country s economy will decelerate further if President Robert Mugabe wins. Zimbabwe s economy still suffering a hangover from a decade-long recession relatively stabilised and registered ...